नेपालमा ईसाइकरण किन भईरहेको छ ? | नेपाल दर्शन
नेपालमा ईसाइकरण किन भईरहेको छ ?
नेपालमा इसाइकरण किन भईरहेको छ भनेर भन्नु भन्दा पहिले बाइवल र ईसाइकरणका बारेमा केहि कुरा जान्न जरुरि छ।
विश्लेषकहरु भन्दछन ईसाइ कुनै धर्म होइन, वाइवल कुनै सामान्य उपन्यास जत्ति पनि छैन, जसबाट कुनै ज्ञान हाशिल गर्न सकियोस। पुर्ण रुपले अवैज्ञानिक र झुटा कुराहरुले भरिएको किताव हो बाइबल।
विश्वभरी प्रचलनमा रहेको हालको वाइवल एक चुनावबाट मान्यता पाएको हो। तत्कालिन समयमा धेरै वटा पुस्तकहरुलाई यशुको वचन भनेर दावी गरिएको थियो। त्यसरी दर्जनौ बाइबलहरु संग चुनाव लडेर केहि सामान्य मतान्तरले मात्र चुनाव जितेर बर्तमान बाइबल पठन पाठन हुन् थालेको हो। चुनावबाट जितेको कुनै एक पुस्तक कसरि धार्मिक पुस्तक हुन्छ ?
संसार भरि भएका द्वन्द तथा आतंकको जरो खोज्दै गयौ भने कुनै न कुनै रुपमा वाइवलको भूमिका भेटन सक्छौ। पहिलो र द्वितीय विस्वयुद्ध पनि ईसाइहरु विचाकै युद्ध हो। १२ औ शताब्दि तिर भएको क्रुसेडको युद्ध बाइबल संग नै समबन्धित छ। रुवान्डामा भएका नरसंहारमा पनि चर्चको ठुलो भूमिका थियो पछि पोप फ्रान्सिसले रुवाण्डाका राष्ट्रापति सामु माफी समेत मागे। सन् १९९४ मा बहेको रुवाण्डा नरसंहारमा करिव ३ महिना मा १० लाख भन्दा धेरै मानिसहरुले ज्यान गुमाए। ईतिहासमा वाइवल र चर्चको भूमिकामा यस्ता दर्जनौ युद्द तथा नरसंहारहरु भएका छन्।
वाइवलले केवल मानिसहरुलाई झुट बोल्न र गलत कुरा स्विकार्न सिकाउछ।
ईसाइहरुको मुख्य उद्देश्य भनेको संसारलाई नै इसाई साम्राज्यको रुपमा स्थापना गर्ने हो। यसका लागि उसले हदै सम्मको हतकण्डा अपनाउछ। गरिव देशको खनिज स्रोत लुटन र उपनिवेशीक शाशन लादनका लागि पनि त्यहाको मानिसहरुको मौलिक धर्म संस्कृति मासेर च्रिस्तियन बनाउन जरुरि हुन्छ। जवसम्म मानिसहरुले आफ्नो मौलिक धर्म संस्कृति मान्दछन, तव सम्म कसैको पनि दास बन्दैनन र उपनिवेशिक शाशन स्विकार्दैनन। विशेस गरेर युरोपका केहि रास्ट्रहरु र अमेरिका लगायतले ईसाइ पन्थको प्रचार गर्नमा लगानी गर्ने गर्दछन नेपाल र भारत जस्तो देशमा ईसाइकरण किन भैरहेको छ भन्ने विषयमा अवश्य पनि केहि तथ्यहरुका बारेमा चर्चा गर्नु अपरिहार्य हुन्छ।
वाइवल र युद्ध आतंक एकै हो। नेपाल जस्तो गरिव देशहरुमा धर्म परिवर्तन गराएर आफु अनुकुलको दास बनाउने र उनीहरुलाई लुटने मुख्य कारण हो।
बुदागत रुपमा हेर्दा नेपालमा बढिरहेको ईसाइकरणका निम्न स्वार्थहरु रहेका छन्।
क) प्राकृतिक खनिज श्रोत माथिको आक्रमण
नेपाल प्राकृतिक श्रोत साधनले अत्यन्त धनि देश हो। नेपालको खनिज श्रोतहरु लुटनका लागि यहाका मानिसहरुलाई धर्मन्तरण गराईदै छ। प्राकृतिक श्रोत भएका र खानिको नजिक तिर रहेका पहाडि भेगका मानिसहरुलाई ईसाई बनाउने र चर्चको निगरानीमा त्यहाको श्रोत साधनको दोहन गर्ने अभिप्रायले मानिसहरुलाई ईसाई बनाईदै छ। धादिङ्ग जिल्लाका उत्तरी भेगमा मणि तथा रुवीका भण्डार रहेको तथ्य बाहिर आएका छन्। त्यहि छेत्रमा
ईसाईहरु सक्रिय भएका छन्। यसैबाट प्रस्ट हुन् सकिन्छ कि नेपालमा ईसाईहरुको गतिबिधि किन बढिरहेको छ।
"अफ्रिकी नेता जेम्मी केन्यटाले भनेका छन्, जव मिसनरीहरु अफ्रिकामा आए, त्यतिबेला हामि संग जमिन थियो र उनीहरुको हातमा बाइबल थियो, उनीहरुले हामीलाई आखा बन्द गर्न लगाएर प्राथना गर्न सिकाए, जव हामीले आखा खोल्यौ तव हाम्रो हातमा बाइबल थियो उनीहरुको हातमा हाम्रो जमिन।"
संसार भरि नै प्राकृतिक स्रोत साधनले सम्पन्न देशहरुमा निरन्तर राजनैतिक अस्थिरता र द्वन्द भैरहेको पाउछौ, यसका साथ् साथै त्यस्ता मुलुकहरुमा ईसाईहरुका गतिबिधि अत्याधिक हुने गर्दछ।
ख) युद्ध तथा हतियार व्यापार
नेपाल रणनैतिक हिसावले अत्यन्त महत्वपुर्ण स्थानमा अवस्थित छ। संसारको आधा जनसंख्या भएका दुई ठुला देशहरु चीन र भारतको बिचमा नेपाल पर्दछ। चीन र भारत दुवैलाई नियन्त्रण गर्न सबैभन्दा उपयुक्त भुमि भनेको नेपाल नै हो। जसरि मध्य पूर्वी एशियामा अफगानिस्तान रणनैतिक हिसाबले महत्वपुर्ण छ त्यसै गरेर दक्षिण एशियामा नेपाल रणनैतिक हिसाबले सबैभन्दा महत्वपुर्ण स्थानमा रहेको छ।
चीन र भारतलाई नियन्त्रण गरि आफ्नो अभिष्ट पुरा गर्नको लागि नेपाल वेश क्याम्प (आधार शिविर) हुने देखेर नै नेपालमा पश्चिमीहरुले आखा गाडेका हुन्। यदि चीन र भारतमा युद्ध मच्चाउन सकियो भने हतियारको ब्यापार फ़स्टाउछ। अमेरिका सहित युरोपका केहि राष्ट्रहरुको अर्थतन्त्र हतियारको व्यापारमा अडेको छ। जसले वस्तु उत्पादन गर्छ उसले वस्तु बेच्ने बजार पनि निर्माण गर्छ भने जस्तै हतियार उत्पादन गर्ने संसारका ठुला राष्ट्रहरु चीन र भारत जस्तो धेरै जनसंख्या भएको र बहुभासी बहु-सांस्कृतिक देशहरुमा राजनैतिक र सामाजिक घुसपैठ सहित वाइवल मार्फत युद्ध फैलाएर हतियार बेच्ने बजार निर्माण गर्न चाहन्छन । नेपालमा मात्रै १२० भन्दा धेरै जातीय समूहहरु छन् भने भारतमा झण्डै २००० भन्दा धेरै जातीय समूहहरु छन यसकारण पनि नेपाल र भारत जस्तो देशहरुमा जातिय द्वन्द गराउन सहज छ।
त्यसैले नेपालमा बढिरहेको ईसाइकरण नेपालको धर्म संस्कृति सिध्याउने खेल मात्र होइन, बरु भारत र चिनलाई समेत तहस नहस बनाउने योजना सहितको रणनैतिक काम हो भनेर बुझ्दा हुन्छ ।
ग) उपनिवेश कायम गर्न
उपनिवेशिक शाशन कायम गर्न पनि ईसाइकरणले महत्वपुर्ण भूमिका खेल्दछ। आजभन्दा १०० वर्ष अगाडिको विश्व परिस्थिति हेर्ने हो भने वेलायत, फ्रान्स, इटाली, आदि देशहरु हतियारको बलमा अन्य देशहरु माथि आक्रमण गर्दथे। अन्य देशका धनमाल लुटन, प्राकृतिक खनिज श्रोतको दोहन गर्नका लागि सैन्य बलको आधार लिने गर्दथे। अहिले बन्दुक र तरवारको भरमा अर्को राष्ट्रमाथि सजिलै आक्रमण गर्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसैले प्राकृतिक श्रोतले सम्पन्न देशहरुका मानिसहरुलाई आफु अनुकुलको गुलाम बनाउन र उनीहरुको श्रोत साधन लुटनको लागि बाइबललाई हतियारको रुपमा प्रयोग गरिएको हो। हतियारले शारीरिक डर त्रास सिर्जना गरि उसको गुलाम स्विकार्न बाध्य बनाउथ्यो भने अहिले बाइबलले मानसिक रुपमा गुलाम बनाई रहेको छ । त्यसैले वर्तमान समयमा अफ्रिकाका राष्ट्रहरु, र एसियाका बिसेष गरेर नेपाल, भारत, श्रीलंका जस्ता देशहरुमा ईसाई मिसनरीका रुपमा पसेर मानिसहरुलाई मानसिक गुलाम बनाउने काम भैरहेको छ।
घ) युरोप र अमेरिकाका लागि आवश्यक दास तथा नोकरहरु उत्पादन गर्न
जसरि अफ्रिकाबाट सिङ्गै युरोप र अमेरिकाका लागि दासहरु लगिन्थ्यो त्यसरी नै नेपाल र भारत जस्ता देशहरुबाट मानिसहरुलाई वाइवलको रटान लगाएर मानसिक रुपमा दास बनाई युरोप अमेरिका जस्ता देशहरुमा आवश्यक कामदार पूर्ति गर्न चाहन्छन। पहिले दाम्लो वा फलामको सिक्रीले बाधेर लगिन्थ्यो भने अहिले भिसा लगाएर राजि कुसी रुपमै तयार पारि कामदार (दास) हरु लागिरहेका छन्। उसकै भाषा र संस्कृति सिकेर/सिकाएर पुर्ण रुपले दास मानसिकता यहि तयार गरेर लगिन थाल्यो।
सस्तो कामदार केवल नेपाल र भारत जस्ता देशहरु बाट प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने उनीहरुलाई राम्ररि थाहा छ। हामीलाई बिकशित हुन् नदिने, आफ्नो धर्म संस्कृति मान्न नदिने तर केवल वाइवलको पाठ पढाएर चरम गरिविमा धकेलेर उसका लागि नोकर तयार गर्ने रणनितिको रुपमा बुझ्न सकिन्छ।
ङ) फुटाउ र राज गर
भारतका नागाल्याण्ड, मिजोरम, मेघालय जस्ता प्रान्तहरुमा च्रिस्तियनको संख्या अत्याधिक बढेको छ। ति राज्यहरुमा दुइ तिहाई भन्दा धेरै च्रिस्तियन जनसंख्या भैसकेको छ। केहि पृथकतावादी आन्दोलन चर्किन थालेको छ। भारत सरकारलाई अहिले ति राज्यहरु टाउको दुखाईको विषय बनिसकेको छ। ति राज्यहरुले भारतबाट छुट्टिने माग गरिरहेका छन्। त्यस छेत्रका कतिपय स्थानहरुमा भारतीयहरुलाई प्रवेश निषेध समेत गरिसकेका छन् । आगामी दिनमा नेपालमा पनि यो अवस्था नआउला भन्न सकिदैन। भारतमा हरेक वर्ष तिन देखि चार लाख मानिसहरु प्रलोभन र डर त्रासको सिकारमा परेर ईसाई बनिरहेका छन्।
च) आर्थिक लुट
चर्च मार्फत दशामंस भेटि र लेवीको नाममा पनि धेरै आर्थिक लुट भैरहेको छ। सतहि रुपमा हेर्दा नेपालमा ईसाइकरणको लागि बाहिरबाट पोइसा आइरहेको जस्तो देखिए तापनि पछिल्लो समय नेपालकै चर्चहरुबाट पोइसा बाहिर जान थालिसकेको छ । आगामी दिनमा जव यहाको ईसाइकरणको व्यापार फ़स्टाउछ तव लगानीकर्ताले नेपालबाट आर्थिक लाभ लिन थाल्दछन। अहिले ईसाइकरणका लागि लगानी गर्ने पश्चीमा देशहरुले अवश्य पनि आफ्नो लगानी उठाउछन र मुनाफा कमाउछन नै, त्यसैले भविष्यमा नेपालबाट धेरै ठुलो धन राशि चर्च मार्फत बाहिर जाने पक्का छ।
पश्चिमाहरुको चासो नेपालमा पहिले देखि नै छ। नेपाल एकिकरणकै समय तिर पास्टरहरु नेपालमा सक्रिय थिए। उनीहरुको खराव रणनिति बुझेर नै पृथ्वीनारायण शाहले देश निकाला गरिदिए। नेपाल रणनैतिक हिसावले महत्वपुर्ण भएकोले नै पश्चिमाहरु नेपालमा आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्न चाहन्छन।
विस २०३२ साल तिर तिब्बती खम्पाहरु प्रयोग गरि नेपालको मुस्ताङ्ग जिल्ला नेपालबाट अलग गरेर तिब्बत टुक्र्याउने प्रयास गरियो, त्यसमा उनीहरु असफल भए।
नेपालमा हिन्दु अधिराज्य र राजसंस्था रहुन्जेल ईसाईहरु खुल्ला रुपले धर्म प्रचार गर्दै गाउ-गाउ हिडन पाउदैन पाएनन, त्यसैले राजसंस्थाको अन्त्य गरियो । धर्मनिरपेक्ष गरेर ईसाईहरुलाई धर्म प्रचारको लागि बाटो खुकुलो बनाईयो । जातिय नरसंहार र पहाडि मधेसी समुदाय बीच घृणाको भावना फैलाउन टिकापुर हत्याकाण्ड (०७२) र गौर हत्याकाण्ड(०६३) जस्ता नरसंहार गरियो। यी दुई टिकापुर र गौर हत्याकाण्डबाट मधेसी र पहाडि विच शत्रुता र चरम विद्रोहको भावना पैदा गर्न खोजियो तर उनीहरुले सोचेको जस्तो भएन। सिके राउतको राजनीति पनि अवशानको बाटोमा पुगेको छ। त्यसले ईतिहासमा पश्चिमा हरु आफ्नो भूमिका बलियो बनान जति प्रयास गरे तापनि हरेक घटना हरुमा उनीहरुले सोचे जस्तो नतिजा आइरहेको छैन।
त्यसैले सिंगो नेपाललाई नै ईसाइकराण गरेर उनीहरु आफ्नो अभिष्ट पुरा गर्न चाहन्छन ।
सार्वभौम अखण्ड राष्ट्रका लागी राजसंस्था अपरिहार्य
लेखक मोहन लामा रुम्बा
यसकारण नेपाल हिन्दू राज्यनै हुनुपर्छ
भगवानको नामले जोडिएका वैदिक सन्तानहरु